तराईबाट आउनेहरूसँगै काठमाडौं भित्रियो त्रास, न स्वास्थ्य परीक्षण न त यकिन तथ्याङ्क !
लकडाउनको उल्लंघन गर्दै तराईका जिल्लाबाट मानिसहरू राजधानी भित्रिन थालेपछि काठमाडौं उपत्यमा त्रास फैलिएको छ ।
लकडाउन शुरू भएको ५ साता नाघिसक्दा उपत्यकामा कोरोनाभाइरस संक्रमणको असर कम देखिपछि तराईका जिल्लाबाट मानिसहरू भित्रिने क्रम शुरू भएको हो ।
आइतवार (वैशाख– १५ गते) विराटनगरबाट आएका १ सय ६० मध्ये १ सय १५ जना सहजै उपत्यका भित्रिए । बाँकी ४५ जनालाई प्रहरीले रोकेर राखेको थियो तर पछि स्वास्थ्य परीक्षण गरेर आफ्नो घरमा सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्न भनिएको महानगरीय प्रहरी परिसरका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्ष (एसएसपी) श्याम ज्ञवालीले बताए ।
‘नागढुंगासम्म आएर अड्किएका ४५ जनाको स्वास्थ्य परीक्षण गरेर घरमा सेल्फ क्वारेन्टाइनमा पठाएका थियौं,’ एसएसपी ज्ञवालीले लोकान्तरसँग भने, ‘कतिपयलाई हामीले विराटनगर नै फर्काएका थियौं ।’
त्यसअघि नै उपत्यका छिरेका ११५ जनाको स्वास्थ्य परीक्षण समेत गरिएको छैन । उनीहरू कहाँ बस्छन् भन्ने यकिन तथ्यांक समेत छैन ।
लकडाउनलाई कडाइ गर्ने भन्दै गृह मन्त्रालयले निर्देशन जारी गरेको थियो, तर त्यसको उल्लेख्य प्रभाव सडकमा देखिँदैन ।
कोरोनाभाइरसको संक्रमण नफैलियोस् भन्ने हेतुले सरकारले देशमा लकडाउन गरेको हो । लकडाउनको ३९औं दिन आइपुग्दा उपत्यमा रहेका लाखौं नागरिक घर फर्किसकेका छन् ।
उपत्यकाबाहिर लकडाउनभन्दा अगाडि फसेकाहरू र काठमाडौं अब सुरक्षित छ भन्ने हिसाबले फर्किने मानिसहरूको संख्या पनि दिनानुदिन बढिरहेको छ ।
काठमाडौं भित्रिने मुख्य नाकाको रूपमा रहेको नागढुंगाबाट अहिले दैनिक मानिसहरू भित्रिरहेका छन् ।
तराईका जिल्लामा पछिल्लो समयमा कोरोनाभाइरस संक्रमण देखिन थालेपछि उपत्यकामा भित्रिनेहरूसँग यहाँका बासिन्दा त्रसित बन्न थालेका छन् ।
‘उपत्यकामा त्यति धेरै मानिसहरू छिरेका छन्, सरकारलाई कुनै वास्ता छैन, कमसेकम स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने व्यवस्था त गरिनुपर्थ्यो,’ बालाजुका श्याम श्रेष्ठले भने, ‘यदि ती मानिसहरूले कोरोना फैलाए भने कसले जिम्मा लिने ? सरकार निकम्मा भयो ।’
यदि उनीहरूमध्ये एक जनामा पनि कोरोनाभाइरसको संक्रमण देखिएमा उपत्यकाभर फैलिनसक्ने चिन्ता उनमा छ ।
लकडाउन कडाइका साथ पालना गराएका छौं : प्रहरी प्रवक्ता
कोरोनाभाइरसको संक्रमणलाई फैलिन नदिनका लागि सरकारले गरेको लकडाउनलाई कडाइका साथ पालना गराएको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) निरजबहादुर शाही बताउँछन् ।
‘सरकारको निर्देशनपछि लकडाउनलाई कडाइका साथ पलना गराएका छौं । देशभरमा हामीले अहिलेसम्म एक लाखभन्दा धेरै मानिसलाई नियन्त्रणमा लिएर सम्झाइबुझाइ घर फिर्ता पठाइसकेका छौं,’ प्रवक्ता शाहीले लोकान्तरसँग भने ।
यदि कसैले लकडाउनको पालना गर्न अटेर गरेको खण्डमा कानूनबमोजिम कारवाही गर्न समेत पछि नपर्ने शाहीले बताए ।
‘पछिल्लो समय विभिन्न नाकाबाट काठमाडौं भित्रिएका छन् भन्ने छ, छिटफुट मात्रामा त्यस्तो भएको हो । सरकारको निर्देशनअनुसार नाकाहरूमा अहिले कडाइ गर्ने भन्ने छ, त्यसैअनुसार नाकामा कडाइ गर्न सर्कुलर गरेका छौं,’ प्रवक्ता शाहीले भने ।
लुकेर छिरे काठमाडौं
काठमाडौं उपत्यकामा छिर्न खोज्ने मानिसहरूलाई नागढुंगाबाट फर्काउँदा अलि तल गइसकेपछि पिसाब फेर्न जाने भन्दै लुकेर काठमाडौं छिर्ने गरेको पाइएको छ ।
‘हामीले यहाँबाट रोकेर राखेका कतिपय मानिसहरू अलितल पिसाब फेर्न जाने भन्दै भाग्ने गरेका छन् । पिसाब फेर्न जान्छुभन्दा नजाऊ भन्न पनि नमिल्ने,’ नागढुंगामा कार्यरत एक प्रहरीले भने ।
उपत्यका भित्रन खोज्नेहरूलाई नागढुङ्गा प्रहरीले आएकै गाडीमा फर्काएपनि अलि तल गाडीबाट झरेर पैदल काठमडौं छिर्नेहरूको संख्या पनि बाक्लो छ ।
उपत्यका छिर्ने सबै व्यक्तिगत विवरण राखिने
उपत्यका भित्रिने क्रम बढेपछि अब भने प्रहरीले सबैको मोबाइल नम्बरसहितको तथ्यांक राख्ने भएको छ ।
विपत व्यवस्थापन समिति (सीएमसी)ले उपत्यकामा रहेका सबै नाकाबाट भित्रने सवारी र त्यसमा भएका मानिसहरूको व्यक्तिगत विवरणको तथ्यांक राख्ने भएको हो ।
बिहीवार नाकाहरूको निरीक्षण गर्दै समितिले सबैको मोबाइल नम्बर, नाम, बस्ने ठाउँ, आएको ठाउँ लगायतका विवरणहरू राख्न नाकामा रहेका पोष्टहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।
यसले गर्दा उपत्यकामा छिरेका कसैलाई कोरोनाको संक्रमण देखिएमा कन्ट्र्याक ट्रेसिङ गर्न सजिलो हुने सीएमसीका सदस्य समेत रहेका महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख एसएसपी श्याम ज्ञवालीले बताए ।
७८ हजार मानिस कारवाहीमा
गत चैत ११ गतेदेखि भएको लकडाउनमा उपत्यकामा मात्रै ७८ हजारभन्दा धेरै लकडाउन उल्लंघनको कारवाहीमा परेका छन् ।
महानगरीय प्रहरी कार्यलयको तथ्यांक हेर्ने हो भने लकडाउनको ३४ दिन(चैत ११ देखि वैशाख १६ गतेसम्म)मा उपत्यकामा मात्रै ७८ हजार ७ सय ५७ जनालाई कारवाही गरिएको छ, जसमा १७ हजार ९८२ जना महिला र ६० हजार ७१२ जना पुरुष रहेका छन् ।
कारवाहीमा परेका उनीहरूलाई २ घण्टा लकडाउन उल्लघंन गरेको स्थानमा उभ्याउने र सम्झाएर पठाउने गरिएको छ ।
यस्तै १६ हजारभन्दा धेरै सवारी साधन कारवाहीमा परेका छन् । चारपांग्रे १ हजार २४५ र साना सवारी साधन १४ हजार ७८६ वटा कारवाहीमा परको महानगरीय प्रहरी कार्यलय रानीपोखरीले जनाएको छ ।